खानपिन - Samata Khabar
चितवन । पर्वमा मीठोचोखो खानु त परको कुरा अन्न बालीले तीन महिना धान्न मुस्किल पर्ने चेपाङ समुदायमा अधिकांश समय कन्दमूलले धान्ने गर्दछ । बिहान र बेलुकाको छाक टार्नका लागि उनीहरुले निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ । जिल्लाको ग्रामीण पहाडी भेगमा चेपाङ समुदायको बाक्लो बस्ती छ । खेतीपाती र कामका लागि बालबालिकासमेत खटिन्छन् । स्कुले […]
काठमाडौं : अण्डा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ। तर एकदिनमा कति अण्डा खानुपर्छ र पकाउने सही तरिका के हो भन्नेबारेमा तपाईंलाई थाहा छ ? या धेरै अण्डाले हानी गर्न सक्छ ? चिकित्सकहरु पोषक तत्वले भरपूर भएकाले खानामा अण्डा सामेल गर्न सल्लाह दिन्छन्। यो भिटामिन ए, बी, डी र बी १२ का अलावा लुटीन र जीएजेन्थिनजस्ता पोषक […]
यस्ता छन् क्वाँटी खानुका फाइदा
चना, बकुल्ला, मुगी, बोडी, मास, भटमास, ठूलो सिमी, ठूलो केराउ, सानो केराउ लगायतका नौ वटा गेडागुडी मिसाएर बनाएको एक प्रकारको खानेकुरा हो, क्वाँटी। क्वाँटी टुसा उमारी बनाइने विशेष प्रकारको झोलिलो खानेकुरा हो। क्वाँटी नेवारी शब्द हो। जसको अर्थ क्वाँ भनेको तातो र टी भनेको तरल पद्धार्थ हुन्छ। क्वाँटी विशेष गरी जनैपूर्णिमाका दिन खाने चलन छ। […]
काठमाडौं : किबी फल सुरुमा चीनमा पत्ता लागेको र २०औं शताब्दीमा न्युजिल्यान्डमा यसको विकास भएको मानिन्छ। त्यतिखेर यसलाई चाइनिज गुजबेरीको रूपमा चिनिन्थ्यो। पछि फलफूल विज्ञहरूले यसको नाम ‘क्वी’ राखेका हुन्। यो न्युजिल्यान्डमा पाइने ‘क्वी’ चराजस्तै भएकाले यसको नाम ‘क्वी’ फल राखिएको भनिन्छ। यस फलमा धेरै क्यालोरी तथा पोषणयुक्त तत्व हुन्छ। यस फलबाट हुने फाइदा छाला […]